အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ | Ads.com.mm
Ads.com.mm ရဲ့အကူအညီနှင့် သုံးစွဲသူပံ့ပိုးမှုကဏ္ဍမှကြိုဆိုပါတယ်
ဒီနေရာမှာသင်ဟာအမေးအများဆုံးမေးခွန်းများရဲ့အဖြေများ၊ လျှင်မြန်စွာကုန်ပစ္စည်းရောင်းထွက်ရန်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသော ဈေးဝယ်မှုလမ်းညွှန်တို့ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Ads.com.mm သည် သင်နေထိုင်ရာမြို့ အတွင်းတွင် အရာဝတ္ထုပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် နိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အခမဲ့ကဏ္ဍစုံကြော်ငြာဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာတစ်ခုတင်ရန် ၂ မိနစ်မျှသာကြာပြီး ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်သည် တစ်ပတ်ရစ်ကားများမှစ၍ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ၊ အိမ်ခြံမြေများ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် အခြားအသုံးပြုပြီးပစ္စည်းများ (သို့မဟုတ်) အသစ်များကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ Ads.com.mm သည် House.com.mm, Motors.com.mm, Work.com.mm, Kaymu.com.mm နှင့် Shop.com.mm နှင့်အတူ Rocket Internet Group ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
Ads.com.mm ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
Ads.com.mm မှာ အကောင့်မဖွင့်ပဲနဲ့လည်း ကြော်ငြာတင်နိုင်ပြီး ရှာဖွေမှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းAds.com.mmကို အသုံးပြုရသည့် အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်အတွက်အကောင့်ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုခြင်းကို ပိုမိုပြုလုပ်စေလိုပါတယ်။
Ads.com.mm မှာ ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေရပါသလဲ?
အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ယနေ့ပင် Ads.com.mmသို့သွားရောက်ပြီးလျှင် မိမိရှိရာမြို့နယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ကြော်ငြာကို ကြော်ငြာတင်မည် ကိုနှိပ်ပြီးတင်နိုင်ပါတယ်။ သင်၊ သင့်ကြော်ငြာနှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပါ၊ ပုံများကိုတင်ပြီးနောက်
သင်၏ကြော်ငြာကိုပြုပြင်တည်းဖြတ်ရန်အတွက်၊ သင်ကြော်ငြာကိုတင်သည့်အချိန်တွင် သင်၏အီးမေး(လ်)ထဲ၌လက်ခံရရှိထားသောပြုပြင်ရန်လင့်(ခ်၍)ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်၏အကောင့် ကိုနှိပ်၍သင်၏ အကောင့်အီးမေး(လ်)နှင့်စကားဝှက်တို့ထည့်ပြီးဝင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှပြောင်းလဲပြုပြင်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပါမည်။ ထိုကြောင့် သင်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောကြော်ငြာမှာ အွန်လိုင်းပေါ်တက်လာရန် အနည်းဆုံးအချိန်နာရီဝက်မျှကြာမြင့်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ကြော်ငြာတွင်ပုံတင်ရန်အတွက် ကြော်ငြာကိုပြုပြင်ရန်ဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ထိုနောက် + ကိုနှိပ်၍ပုံများတင်ပြီးနောက်တွင်သင်၏ကြော်ငြာကိုကျွန်ုပ်တို့မှပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ခေတ္တမျှစောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
ကြော်ငြာတစ်ခုသည် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ပေါ်နေနိုင်ပါသလဲ?
သင်ရဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုဟာ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ရက်ပေါင်း (၉၀) ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို သက်တမ်းမကုန်ခင်အတွင်း ရောင်းချလိုက်ရပါက ဖျက်ပစ်သင့်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရောင်းမထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါက သင့်ကြော်ငြာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်တွင်ပြန်လည်ထပ်တင်ခွင့်ရပါမည်။
ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာကို ဘယ်လိုဖျက်ရပါသလဲ။ ဘာကြောင့်ဖျက်သင့်ပါသလဲ?
သင်ကြော်ငြာထားသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားရောင်းထွက်သွားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆက်မရောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်ဖြစ်စေ ထိုကြော်ငြာကိုဖျက်နိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာကိုဖျက်ရန်အတွက်၊ သင်၏ကြော်ငြာရှိရာသို့သွားရောက်၍ ဖျက်မည် ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုနောက်သင်၏စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းကာကြော်ငြာကိုဖျက်ပစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းအားရွေးချယ်ပြီး ကြော်ငြာကိုဖျက်မည် ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ကြော်ငြာကို facebook,twitter,pinterest နှင့် အခြားသောလူမှုရေးကွန်ယက်များတွင် ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ဖြန့်ဝေလိုသော ကြော်ငြာသို့သွားပြီးနောက် သင်ဖြန့်ဝေလိုသော လူမှုကွန်ယက်ပုံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ကြော်ငြာ၏လင့်(ခ်)ကိုကူးယူပြီးသင်ဖြန့်ဝေလိုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာတွေကိုတော့ အမြဲတမ်းအခမဲ့တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရီမီယမ်ဝန်ဆောင်မှုကတော့ ကြော်ငြာကို အထူးကြော်ငြာများအတွက်သီးသန့်နေရာမှာ အထူးတလည်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ပရီမီယမ်အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသလည်း?
ကျွန်ုပ်တို့မှ ရောင်းချသော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက၊ ဤစာမျက်နှာ သို့သွားရောက်လေ့လာပါ။
သင်ရွေးချယ်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားနဲ့ ရက်အရေအတွက် (ဥပမာ ၁ ရက်၊ ၃ ရက် သို့ ၇ ရက် စသည်) ပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးကြော်ငြာအကြောင်းစာမျက်နှာ သို့သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းများမှာ အခြေအနေအကြောင်းအရာများပေါ် မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။
သင့်ရဲ့ကြော်ငြာတွေကို အထူးတလည်ဖော်ပြရန်အတွက် ပရီမီယမ်ဝန်ဆောင်မှုများကို:
အကောင့်ဖွင့်ထားပါက သင်၏ ads.com.mmအကောင့်မှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်မှ အထူးတလည်ကြော်ငြာလိုသော ကြော်ငြာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သင်အထူးတလည်ဖော်ပြလိုသောကြော်ငြာ၏ စာမျက်နှာမှလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ "ကြော်ငြာကိုထိပ်ဆုံးပို့မည်" ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
သင်ကြော်ငြာတင်ပြီးသည့်နောက်တွင် သင်၏အီးမေး(လ်)ထဲသို့ရောက်ရှိလာသော အတည်ပြုအီးမေး(လ်)မှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ပရီမီယမ်အထူးဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူပြီးသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာကို အထူးကြော်ငြာများအတွက်သီးသန့်ဖော်ပြပေးသော နေရာတွင်မတွေ့ရသေးပါ။
သင့်အနေဖြင့် သင်၏အထူးကြော်ငြာကိုငွေပေးချေပြီးချက်ချင်းနောက်ပိုင်းတွင်မတွေ့ရသေးပါက ဖြစ်နိုင်သည်မှာ:
သင်၏ကြော်ငြာကို ကျွန်ုပ်တို့အသင်းမှ အထူးကြော်ငြာနေရာသို့ပို့ဆောင်နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အထူးကြော်ငြာများအားလုံးကို သာတူညီမျှသော အရေးပါမှုဖြင့်ပြသပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်အနေဖြင့်အခြားသော အသုံးပြုသူများ၏အထူးကြော်ငြာများကိုတွေ့မြင်နေနိုင်ရသော်လည်း စာမျက်နှာကို Refresh ပြန်လည်ပြုလုပ်လျှင် သို့ နောက်စာမျက်နှာသို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါက အထူကြော်ငြာများကိုတွေ့မြင် နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ သင်၏ကြော်ငြာဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သော ကဏ္ဍ သို့မဟုတ် နေရာဒေသစာမျက်နှာမဟုတ်၍ဖြစ်သည်။ (အထူးကြော်ငြာများကို ကြော်ငြာများအားလုံးစာမျက်နှာနှင့် အဆိုပါကြော်ငြာများ၏ သက်ဆိုင်ရာဏ္ဍစာမျက်နှာများတွင် ပြသထားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အထူးဆိုဖာကြော်ငြာတစ်ခုကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကဏ္ဍတွင် တွေ့ရှိရမည်မဟုတ်ပေ)
Ads.com.mm တွင်စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါက , သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်ဟာ သင်၏ကြော်ငြာအားလုံးကို စကားဝှက်တစ်ခုတည်းဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလို့ရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။. ထို့ကြောင့် သင်ဟာ သင့်ကြော်ငြာအားလုံးကို လွယ်ကူစွာနဲ့ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်းစတဲ့စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။
သင်၏ကြော်ငြာများကိုပြုပြင်စီမံရန်အတွက်၊ ပင်မမျက်နှာ၏အပေါ်ဆုံးရှိ ကျွန်ုပ်၏အကောင့် နှိပ်၍သင်၏အကောင့်သို့သွားပါ။ သင့်ကြော်ငြာများအားလုံး၏ခြုံငုံဖော်ပြချက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင်သင်ပြုပြင်စီမံလိုသည့်ကြော်ငြာကိုရွေးချယ်စီမံနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Ads.com.mm ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါသလား
Ads.com.mm မှာ အကောင့်မဖွင့်ပဲနဲ့လည်း ကြော်ငြာတင်နိုင်ပြီး ရှာဖွေမှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းAds.com.mmကို အသုံးပြုရသည့် အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်အတွက် အကောင့်ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုခြင်းကို ပိုမိုပြုလုပ်စေလိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အကောင့်၏ အချက်အလက်များကို မည်သို့ပြုပြင်နိုင်ပါသလဲ?
သင့်အကောင့်၏ အချက်အလက်များကိုပြုပြင်ရန်အတွက် သင်ပြုပြင်လိုသောအကောင့်ဖြင့်loginပြုလုပ်ပြီးနောက်(ပြုပြင်ရန်)ကိုနှိပ်ပါ။